कस्तो छ नेपाल र पाकिस्तानको इतिहास? | Hamro Khelkud
कस्तो छ नेपाल र पाकिस्तानको इतिहास?
काठमाडौँ (हाम्रो खेलकुद) – पाकिस्तान र नेपाल एकै महादेशका टोलि भएपनि नेपालले पाकिस्तानको युवा टोलीसंग खेल्न पनि निकै कसरत गर्नु परेको छ। पहिलोपटक सन् २००० को युथ १९ विश्वकपमा पाकिस्तान र नेपाल भिड्दा नेपाललेलाई ३० रनको विजय हासिल गरेको थियो। नेपालको पाकिस्तानविरुद्ध यो अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट नतिजा हो।
सन् २०१० मा बंगलादेशमा आयोजना भएको साफ गेम्समा नेपाल र पाकिस्तानको युथ–२१ टिम भिडेका थिए। टि–२० फरम्याटमा भएको उक्त खेलको कप्तानी पनि ज्ञानेन्द्रले नै सम्हालेका थिए। ज्ञानेन्द्रले २१ रनको अविजित पारी खेलेको उक्त खेलमा नेपाल ९१ रनको भारी अन्तरले पराजित भएको थियो।
सन् २०१२ मा मलेसियामा भएको युथ–१९ एसिया कपमा नेपाल र पाकिस्तान पनि खेलेका थिए। नेपालले उक्त खेलमा८ विकेटको पराजय भोगेको थियो।
सन् २०१५ मा वकार युनिसको प्रशिक्षणमा रहेको पाकिस्तानले आबुधाबीमा नेपालसंग एकदिवसीय खेलेको थियो। जसमा ठुला खेलाडी सम्मीलित पाकिस्तानले पहिलो ब्याटिङ गर्दै ६ विकेटको क्षतिमा ३ सय २६ रन बनायो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले ५ विकेटको गुमाउँदै २ सय ४५ रनको सम्मानजनक योगफल तयार पारेको थियो।